फुन्टी, कान्छी, हर्के हवल्दार जस्ता सिरियलबाट चर्चा कमाएकी सुन्दरी कलाकार आशा खड्कालाई फेरी के भयो ? – Gazabkonews
फुन्टी, कान्छी, हर्के हवल्दार जस्ता सिरियलबाट चर्चा कमाएकी सुन्दरी कलाकार आशा खड्कालाई फेरी के भयो ?
फुन्टी, कान्छी, हर्के हवल्दार जस्ता सिरियलबाट चर्चा कमाएकी सुन्दरी कलाकार आशा खड्कालाई फेरी के भयो ? सौतेनी आमाले देख्न सकिनन् आशाको खुशी र फु टा, इ दिइन् आँ खा, लकडाउनमा राम्ररी अस्पताल समेत नखुलेका बेला आशा फेरी अस्पताल धाउन बाध्य, आँखा नै फु,टे,प,छि अब के गर्छिन् आशाले ?
सुन्दरीजलस्थित वाग्मतीबाट उपत्यकामा लगिएको खानेपानीको ठूलो पाइप जीर्ण भई चुहावट भइरहे पनि मर्मतसम्भारमा सरोकार भएका निकायको ध्यान जान सकेको छैन । जीर्ण भएका वर्षौं पुरानो खानेपानीका पाइप नफेरिँदा ठाउँठाउँमा पानी खेर गएको छ । जीर्ण पाइपबाट पानीका फोहरा छुटे पनि मर्मतसम्भारमा सरोकार भएका निकायको ध्यान गएको छैन । दर्जनौँ स्थानमा पानीको फोहरा छुटेर खेर जाने गरे पनि मर्मतसम्भार छिटो नहुने गरेको गोकर्णेश्वरका स्थानीयवासी रामबहादुर श्रेष्ठ गुनासो गर्नुहुन्छ ।
खानेपानीका लागि लगिएको पानी पाइप जीर्ण भएर खेर जान्छ तर हामी मुहानस्थलमै बसे पनि हप्तादिनसम्म धारामा पानी नआउने गरेको उहाँको गुनासो छ । मेलम्चीबाट ल्याएको पानीको ठूला पाइप घरमुनिबाट गए पनि मुहानस्थलकै स्थानीयवासीले खानेपानी पाएका छैनन् । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड महाँकालचौर शाखाका कार्यालयप्रमुख उमेश मरहट्ठा पाइप पुरानो भएकाले ठाउँ ठाउँबाट चुहावट हुने गरेको स्वीकार्नुहुन्छ । चुहावटलाई तत्काल मर्मतसम्भार गर्ने गरेको उहाँको दाबी छ ।
मेलम्चीको पानी राजधानीमा वितरण शुरु गरेपछि महाँकालचौरसम्म पुरानै पाइपलाइनबाट पानी दिने गरी व्यवस्थित गरिएको लिमिटेडले जनाएको छ । बस्ती कम हुँदा सानो पाइपबाट काठ क्षेत्रमा पानी वितरण गरिएको थियो । बस्ती बढेपछि सानो पाइपबाट धेरै जनसङ्ख्यालाई पानी वितरण गरिँदा कतै आउने कतै नआउने हुने गरेको छ । ठूलो पाइपबाट पानी वितरण गर्न जाँच भइसकेको शाखाप्रमुख मरहट्ठाले जानकारी दिनुभयो । पहिले पाइप खेतबारीबाट लगिएको थियो सडक बनेको थिएन । सानो गोरेटोबाटोमात्र थियो । अब धेरै स्थानमा सडक बनिसकेकाले सडकबाट पाइप राख्न लागिएको लिमिटेडले जनाएको छ ।
सुन्दरीजल पानी प्रशोधन केन्द्र जीर्ण भएकाले महाँकालचौरभन्दा माथिका धारामा धमिलो पानी आउने गरेको छ । यस क्षेत्रको धारामा पिउन त परै जाओस् घरायसी प्रयोजनमा समेत उपयोग गर्न नसकिने पानी आउने गरेको छ । कोरोनाबाट बच्न जारी निषेधाज्ञाका बेला धारामा पानी नपाएपछि स्थानीयवासी पानी खोज्न टाढाटाढाको ढुङ्गेधारामा जान बाध्य छन् । पानी खोज्न जाँदा कोरोना फैलने डर बढेको स्थानीयवासी रञ्जु पुडासैनीको गुनासो छ । लिमिटेडले तालिका बनाएर खानेपानीको व्यवस्था गरिदिए कोरोनाबाट बच्न सहज हुने भए पनि यसतर्फ स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलगायत सरोकार भएका निकायको ध्यान जान नसकेको उहाँको भनाइ छ ।